अविवाहित नायिका रेखा फागो गर्भवती ! सिने जगतमा सनसनी « Naya Page
अविवाहित नायिका रेखा फागो गर्भवती ! सिने जगतमा सनसनी
प्रकाशित मिति : 12 February, 2018 1:07 pm
काठमाण्डौं, २९ : नेपाली सिने जगतमा अहिले नायिका रेखा फागोको एकाएक चर्चा चुलिएको छ । त्यसको कारण हो उनी गर्भवती बनेकी छन् । यो सत्य हो । घटना सत्य भए पनि यो एउटा गीतको दृष्यका लागि मात्र सत्य हो । नायिका रेखा फागो वास्तविक जीवनमा नभएर एउटा गीतको भिडियोमा गर्भवती रुपमा देखा परेकी छिन् ।
उक्त गीत हिजो मात्रै सार्वजनिक गरिएको छ । पूर्वेली गायक तीर्थराज राईको ‘बाचुञ्जेली जीन्दगी’ बोलको दोस्रो गीत हिजो मात्रै रिलिज गरिएको छ । यसको भिडियो केहि फरक तरिकाले निर्माण गरिएको छ । गीतको भिडियोमा पारिवारिक कथा देखाउन खोजिएको छ । भिडियोमा नायिका रेखा फागोको जोडीको रुपमा मोडल हेमन हाङ राई देखिएका छन् । यी २ को प्रेम सम्बन्ध गाँसिएर विवाह हुन्छ र रेखा गर्भवती हुन्छिन र उनले एउटा सुन्दर छोरीलाई जन्म दिन्छिन ।
यी यस्तै कथामा घुमेर गीतको भिडियो तयार भएको छ । गीतको शब्द संगीत उत्तिकै उत्कृष्ट छ । यता भिडियोमा रेखा र हेमन र बाल कलाकार स्नेहा भण्डारीको अभिनय पनि तारिफयोग्य नै रहेको छ । पछिल्लो समय रेखा धेरै म्युजिक भिडियोमा ब्यस्त हुँदै आइरहेकी छिन् । उनि अभिनित पहिलो चलचित्र ‘तारेभीर’ यसै बर्ष प्रदर्शनमा आएको थियो । उक्त चलचित्रले मध्यम सफलता हासिलता गर्‍यो तर चलचित्रले उनको भविष्यलाई भने अगाडि बढाउन ठूलो मद्दत ग¥यो । उनको सुन्दर रुप र अभिनय क्षेमताले गर्दा उनलाई यतिबेला कामले भ्याईनभ्याई छ । सार्वजनिक गीतमा स्वयम् तीर्थराजकै शब्द र संगीत रहेको छ । गायिका सम्झना ओलीले उनलाई साथ दिएकी छिन् ।
किरात सङ्ग्रहालय निर्माणका लागि अभिनेता दयाहाङ सद्भावना दूत, तन–मन दिएर लागि पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त
खोटाङ, ९ फागुन । विश्वमा छरिएर रहेका किरात राई तथा अन्य समुदायको गन्तव्यस्थलको रुपमा स्थापित
सनीको ‘सरप्राइज’, जुनियर इञ्जिनियर पदको परीक्षामा टप !
काठमाडौं, ९ फागुन । व्यस्क चलचित्र हुँदै बलिउड चलचित्र क्षेत्रमा छिरेकी सनी लियोनीलाई नचिन्ने मानिस
काठमाडौं, ९ फागुन । अभिनेता माधव केसीको बजोड अभिनय रहेको मर्मस्पर्सी म्युजिक भिडियो बजारमा आएको